dhaqanka Personal | khayraadka dhaqanka ka USAHello | USAHello
dhaqanka Personal ka dhigan tahay wax badan oo. Waxaa ka mid ah mawduucyo in ay adag tahay in ay ka hadlaan. Waxaa loola jeedaa in aad noloshaada gaarka ah, caadda, iyo xiriirada aad shakhsi. Sidee dadku u dhaqmaan noloshooda shakhsi ahaaneed ee USA? Baro nadiif ah sii joogi, xiriirka shakhsiyeed, iyo qabatinka.
Ku sugnaanta nadiif ah
Ku sugnaanta nadiif ah waa mid aad u muhiim ah in Americans. Dadka Maraykanka badidoodu qaado qubeys ama maalin kasta qabeeyo. Waxay isticmaalaan saabuun si aad u maydho jidhkooda iyo shaambo si ay timaha ku maydhan. isticmaalka conditioner Qaar ka mid ah in la sameeyo ay fiirin dhaldhalaalaan. Dad badan oo maydhan midig ka dib markii ay jimicsiga. Americans ma jecla urta dhididka iyo si ay u saaray shiir on kilkilaha si ay u joojiyaan dhididka iyo ur.
Americans dharkoodii inta maydh. Dadka intooda badan ma xidhaan dhar isku mid ah laba maalmood oo isku xiga.
guryo nadiif ah waa u muhiim Americans, laakiin dadka badankiisu ma nadiif ah maalin kasta. Marka guests waxaa soo socda, ay u hubiso inay guryahoodu yihiin kuwo nadiif ah oo nidaamsan. Maraykanku waxay isticmaalaan alaabta dhaqa oo lagu nadiifiyo vacuum si ay u caawiyaan la nadiifiyo. Dadka Maraykanka badidoodu ma Siib Kabahaaga marka ay yimaadaan guri galay. Qaar ka mid ah sameeyo, waxaana laga yaabaa in ay ku riday on dacas. Haddii aadan hubin waxa la sameeyo guriga qof, waa iska caadi in aad weydiisato.
xiriirka shakhsiga ah iyo shukaansi
Shukaansiga waa waqti qof qaab jaceyl. Dadka shukaansi wax wada samayn, sida socday casho ama aadista filimada ah. Haddii aad jeclaan lahayd in la qaato qof taariikhda a, waa in aad u Yeedhaan. Hadday kugu yidhaahdaan haa, Labadii aad ee go'aan ka gaari kara meel ay aadaan iyo waxa la sameeyo.
Waxaa jira siyaabo badan si aad u hesho qof taariikhda. Waxaad la soo bandhigay karo by saaxiibo ama la kulmo qof shaqada. Haddii aad taariikhda qof shaqada, aad u baahan tahay inaad u sheegto cidda aad u shaqayso. apps shukaansi on casriga ah waxa ay noqonayaan more caan ah oo leh dadka dhallinyarada ah. Waxaad kala soo bixi kartaa app ah oo la kulmo dad kale oo raba in ay ogaadaan qof taariikhda.
Americans dooran cidda ay taariikhda. waalidkood iyaga siin karaan talo, laakiinse iyagu ma ay go'aansan cida ay taariikhda doonaa ama guursadaan.
Americans aadan dhan ma guursadaan marka ay yar yar yihiin. Ragga iyo dumarka taariikhda laga yaabaa in dad badan ka hor inta aysan ka heli qof inuu guursado. Sidoo kale waa caadi in USA ay dadka waayeelka ah taariikhda furitaan ama dhimasho ee la Wadaage ka dib.
Ragga iyo dumarka labadaba samayn shaqada guriga iyo is ogow caruurta ee Maraykanka. Qiyaastii kala bar dadka ka shaqeeya shaqo ee USA ay yihiin haween. Haweenka ayaa badanaaba waxaa la bixiyaa in ka yar ragga ee USA.
Qoys kasta waa wax yar oo kala duwan. dadka waayeelka ah iyo ayeeyooyinka aad bay uga yar tahay in ay qoysaskooda ee USA ku nool yihiin marka loo eego wadamada kale. Sidoo kale qoysasku waxay leedahay caruur yar. Dadka qaarkood ee USA doortaan iney leeyihiin carruurta oo dhan. Dadka ku nool meelaha miyiga ah waxaa laga yaabaa in caruur leedahay in ka badan dadka ku nool magaalooyinka. Waxay inta badan u leeyihiin nolol yar casri ah, aad. Laakiin xataa in qoysaska dhaqameed, dumarka ugu shaqeeyaan.
Sigaarka iyo tubaakada qaadka
Sigaar looma ogola in wax kasta oo goobaha dadweynaha, oo ay ku jiraan baararka iyo makhaayadaha. Waa in aad 20 cagaha ka fog dhismaha guud in sigaar. Dadka Maraykanka badidoodu ma jeclaan haddii gaariga ama guriga ur sida qiiq oo kale.
Americans ogahay in sigaarka waa khatar. sigaarka Sidaas electronic in gubi nicotine dareere ah waa caan. Laakiin sidoo kale waxay la qabatimo iyo caafimaadkaaga u xun tahay.
Tobaakada la calaliyo waa caanka ah ee qaybo ka mid ah USA iyo aan caadi ahayn ee qaybaha kale. Waxay keeni kartaa kansar carrabka, cirridka, iyo cunaha. Waa inaad si 18 si aad u iibsato oo dhan ka sameysan tubaako.
Cabitaanka khamriga waa mid caadi ah ee USA, gaar ahaan xaaladaha bulshada. Americans khamri cabbaan, biirka, iyo khamriga (cabitaannada sida khamrada iyo vodka). Haddii aadan rabin inaad khamri cabto, waa wanaagsan tahay inaad tiraahdo maya ama weydiiso biyaha. Dadka intooda badan ma noqon doonto kacsan ama aad cadaadis. Haddii ay sameeyaan, odhan lahayn edeb leh mar kale.
Wadista marka aad cabaysid ama isticmaalka daroogada waa khatar ah oo sharci-darro ah. Haddii aad qabtay, waxaad aadi doonaa xabsi. Waxaad sidoo kale ku qaataan doonaa kun oo dollar ah oo ku saabsan sharciga yiqiin iyo ganaax bixinta. Waxaad liisanka qaadi doono. xitaa laga yaabaa in aad leedahay dhibaato la codsiyada shaqada.
In USA, ereyga daroogada ka dhigan tahay daawooyinka iyo sidoo kale daroogooyinka sharci darrada ah. In ka badan-the-counter daroogada yihiin daawooyinka sharci ah in aad ka iibsan kartaa oo aan dhaqtar kuu qorin. Dawooyinka loo qoray dawooyin aadan iibsan kartaa iyada oo aan a qoro caafimaad. waa in aan adiga kula qof wadaagaan daawada. Qaadashada daawooyin uu kuu qoro in aan dhakhtarkaagu kuu qoray kaloo sharci darro ah. Isticmaalka daroogada dhaawacdaa jirkaaga oo aad ka heli kartaa in dhibaato booliska.
marijuana (sidoo kale loo yaqaan dheri ama weed) waa nooc ka mid ah daroogada waa sharci in dalalka qaar ka mid ah. Waa warshad in dadka sigaarka cabto ama cuno. Dadka qaarkood waxa ay isticmaalaan si ay u caawiyaan dhibaatooyinka caafimaadka. Dadka kale u isticmaali jidka dadka khamriga cabbo: maxaa yeelay, waxay jecel yihiin saamaynta uu leeyahay. Gobol kastaa waxa uu leeyahay sharciyo kala duwan oo ku saabsan marijuana. In qaar ka mid ah dalalka, waxaad tagi kartaa xabsi u isticmaalaya. In dadka kale, waa sharci si ay u isticmaalaan marijuana.
Khamriga iyo daroogada qabatimay
Khamriga iyo qabatinka daroogada waa dhibaato aad u daran ee USA. Qabatinka dhigan tahay in aadan joojin kartaa sigaarka, cabbaya, iyo isticmaalka daroogada, xataa haddii aad rabto in aad ama haddii ay ku sameynayaan aad jiran. Waxaa laga yaabaa inaad garasho qabatinka la dhaawicid dad aad u jecel yihiin ama keenaya in aad leedahay dhibaato shaqada. Joojinta noqon karaa mid aad u adag, laakiin waxaad heli kartaa gargaar. Si aad u hesho talo lacag la'aan ah by phone, wac Xadgudubka Maandooriyaha Qaranka iyo khadka Caafimaadka Maskaxda. Waad awoodaa sidoo kale raadin FindHello caawimaad kuu dhow. Gali goob ama cinwaan. Markaas dooran “daryeelka caafimaadka iyo caafimaadka maskaxda” si ay u raadiyaan caafimaadka maskaxda xor ah oo qiime jaban iyo khayraadka qabatinka.
Isgaarsiinta ee USA